Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု)
Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု) ကဘာလဲ။
လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှုသည် အဓိကအားဖြင့် လမစေ့ဘဲမွေးသော ၁၂၅၀ ဂရမ်အောက် အလေးချိန်ရှိသော ကလေးများ နှင့် ၃၁ ပတ်မတိုင်မီ မွေးသောကလေးများတွင် အဖြစ်များပါသည်။ (ကိုယ်ဝန် လစေ့သည်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ဝန်သက် ၃၈ ပတ်မှ ၄၂ ပတ်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။)
ကလေးသည် မွေးကင်းစတွင် သေးငယ်လေလေ မျက်စိအမြင်ချို့ယွင်းနိုင်ချေများလေလေဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါသည် ကလေးငယ်များတွင်မျက်စိအမြင်ချို့ယွင်းစေသော အကြောင်းများထဲတွင် အဖြစ်များဆုံးဖြစ်ပြီး မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ထိုရောဂါဖြစ်လျှင် တသက်လုံးအမြင်ချို့ယွင်းသွားခြင်း နှင့် မျက်စိကွယ်ခြင်းအထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှုရောဂါကို ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သည်မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင် အဆင့်မြင့်သော မွေးကင်းစကလေးစောင့်ရှောက်မှုများရှိခြင်းကြောင့် ပေါင်မပြည့် လမစေ့သောကလေးများကို အတော်ပင် ကယ်တင်နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှုဖြစ်သူများအနက်၉၀% သည် အပျော့စားအဆင့်သာဖြစ်ပြီး ကုသမှုခံယူရန်မလိုပါ။ သို့သော် ပြင်းတန်အဆင့်ရှိသော ကလေးများသည် အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း၊ မျက်စိကွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှုဖြစ်ခြင်းကို အဆင့် ၅ ဆင့် ခွဲထားပါသည်။
အဆင့် ၁ : မူမမှန်သောသွေးကြောများ အနည်းငယ်ရှိခြင်း
အဆင့် ၂ : မူမမှန်သောသွေးကြောများ အတန်သင့်ကြီးထွားလာခြင်း
အဆင့် ၃ : မူမမှန်သောသွေးကြောများ အများအပြား ကြီးထွားလာခြင်း
အဆင့် ၄ : မူမမှန်သောသွေးကြောများ အများအပြား ကြီးထွားလာပြီး အမြင်လွှာ တဝက်ကွာကျခြင်း
အဆင့် ၅ : အမြင်လွှာတခုလုံးကွာကျခြင်း
သွေးကြောများ၏ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များကို သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်ရပါ။ ထို့ကြောင့် မျက်လုံးကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများလုပ်ရန်လိုပါသည်။ လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှုဖြစ်ခြင်းကို Plus disease ဟုခေါ်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများမှာ
သူငယ်အိမ် ဖြူနေခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှုဖြစ်ခင်းသည် မျက်စိအမြင်လွှာတွင် မူမမှန်သော သွေးကြောများကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသွေးကြောများပေါက်ပြီး သွေးယိုကာ အမြင်လွှာတွင် အမာရွတ်များဖြစ်လာပြီး အနေအထားပျက်ယွင်းလာသည်။ ထိုအခါ အမြင်လွှာ ကွာကျပြီး မျက်စိအမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း၊ မျက်စိကွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်လာရသည်။
အမြင်လွှာ၏ ဘေးပတ်လည်ရှိ အာရုံခံကိရိယာများက အမြင်လွှာ၏ အလယ်ဗဟိုဆီသို့ အာဟာရဓါတ်များထုတ်ပေးသည် ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ဆိုကြသည်။ မျက်စိအမြင်လွှာတွင် မူမမှန်သော သွေးကြောများကြီးထွားလာခြင်း၊ ထိုသွေးကြောများပေါက်ပြီး သွေးယိုကာ အမြင်လွှာတွင် အမာရွတ်များဖြစ်လာခြင်းတို့ကြောင့် အမြင်လွှာသည် အနေအထားပျက်ယွင်းလာပြီး ကွာကျသွားရခြင်းဖြစ်သည်။
Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ထိုရောဂါကို ဖြစ်နိုင်ချေများစေသော အကြောင်းများစွာမှာ မွေးကင်းစပေါင်ချိန်နှင့် ကလေးကို စောမွေးသော လအရေအတွက် နှင့် ကလေးငယ်သည် သွေးအားနည်းခြင်း၊ သွေးသွင်းခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း နှင့် ကလေးငယ်၏အခြားသော အထွေထွေကျန်းမာရေးများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။
Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ပထမဦးစွာ ၁၅၀၀ဂရမ်အောက် အလေးချိန်ရှိသော ကလေးများနှင့် ၃၁ ပတ်အောက်မွေးသော ကလေးများတွင် ရောဂါကိုသိရှိရန် မျက်စိစစ်ဆေးမှုများကို မှန်မှန်ပြုလုပ်ရပါမည်။
ထိုကလေးများကို အစတွင် မွေးပြီး ၄ ပတ်မှ ၆ ပတ်အတွင်းစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး မျကစိဆရာဝန်သည် မျကစိသူငယ်အိမ်ကျယ်စေရန် မျက်စဉ်းခတ်မည်ဖြစ်သည်။
မျက်လုံးထဲတွင် ဖြစ်နေသော မူမမှန်သွေးကြောများအပေါ်မူတည်ပြီး ကလေး၏ရောဂါကို အဆင့်ခွဲသတ်မှတ်ပါသည်။ ထို့နောက် မျက်လုံးထဲတွင် မူမမှန်သွေးကြောများဖြစ်နေသော နေရာ၊ ပြင်းထန်မှုနှင့် ကြီးထွားမှု စသည့်အခြားသော အချက်အလက်များ အပေါ်မူတည်ပြီး ၁ ပတ် ခြား ၂ ပတ်ခြား တခါစစ်ဆေးပါသည်။
အများစုသောကလေးများသည် ထိုရောဂါဖြစ်ပါက အမြင်အာရုံကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ပျောက်ကင်းသွားတတ်သော်လည်း ၁၀% ခန့်သည် ပျောက်ကင်းသွားသည့်အချိန်အထိစောင့်ကြည့်ရန် စိတ်ချရသော အနေအထားမရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုကလေးများအတွက် ကုသမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Retinopathy Of Prematurity (လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှု) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ထိုရောဂါအတွက် အထိရောက်ဆုံးကုထုံးမှာ လေဆာရောင်ခြည်ကုထုံးနှင့် အအေးကုထုံးတို့ဖြစ်ပါသည်။
လေဆာရောင်ခြည်သည် ပုံမှန်သွေးကြောများ မရှိသော မျက်စိအမြင်လွှာပတ်လည် ကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
အအေးကုထုံးကို သမားတော်များက အသုံးပြုကြပြီး အေးခဲစေသော အပူချိန်ဖြင့် ပုံမှန်သွေးကြောများ မရှိသော မျက်စိအမြင်လွှာပတ်လည် ကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ နည်းလမ်း ၂ မျိုးလုံးသည် ပုံမှန်သွေးကြောများ မရှိသော မျက်စိအမြင်လွှာပတ်လည် ကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြစ်ပြီး မူမမှန်သောသွေးကြောများ ထပ်မဖြစ်လာအောင် နှင့် ကြီးထွားမှုနည်းသွားအောင် တားပေးပါသည်။
သို့သော် ကံဆိုးစွာဖြင့် ထိုကုထုံးများသည် ဘေးဘက်မြင်ကွင်းရှိပုံမှန်အမြင်အာရုံကိုပါထိခိုက်စေနိုင်သည်။ သို့သော် အလယ်ဗဟိုမြင်ကွင်းရှိမှသာ စားဆတ်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်း နှင့် ကားမောင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သော ကြောင့် ထိုကုထုံးများကို ဆက်လက်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
ထိုကုသမှု ၂ မျိုးလုံးကို ရောဂါ အဆင့်( ၃ )နှင့် Plus disease ရှိသောကလေးများတွင် အသုံးပြုပြီး ထိုကုသမှုများ၏ ရေရှည်တွင် ဖြစ်လာနိုင်သော ဆိုးကျိုးများကို ဆရာဝန်များအနေဖြင့် တိကျစွာ မသိသေးပါ။ အဆင့် ၃ ထက်ပိုဆိုးသော အဆင်များကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
ထိုကုသမှုသည် ဆီလီကွန်ကြိုးကို မျက်လုံးတဝိုက်တွင်တပ်ပြီး တင်းကျပ်ထားသော ကုသမှုဖြစ်သည်။ ထိုနည်းဖြင့် မျက်စိရှိ အမာရွတ်များပေါ်တွင် မျက်သားရည်များကို ထိန်းထားပြီး မျက်လုံးအတွင်းန့ရံမှ အမြင်လွှာကွာကျခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကုသမှုကို ခံယူထားသော ကလေးများသည် လ/နှစ်များကြာလျှင် ဆီလီကွန်ကြိုးကို ဖယ်ရှားပစ်မှသာ မျက်လုံးသည် ဆက်လက်ကြီးထွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက အနီးမှုန်သွားနိုင်သည်။ မျက်သားဖြူကိဆီလီကွန်ု ကြိုးဖြင့်ပတ်သော ထိုကုသမှုမျိုးကို ရောဂါအဆင့် (၄) (၅)ရှိကလေးငယ်များတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။
မျက်လုံးအိမ်အတွင်းရှိ အရည်များကိုဖယ်ရှားကာ ဆားရည်နှင့် အစားထိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖယ်ရှားပြီးလျှင် အမြင်လွှာပေါ်တွင်ကျန်နေသော အမာရွတ်များကို ပါဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပြီး အမြင်လွှာကို အနားပေးကာ မျက်စိအတွင်းနံရံဘက်တွင် ပြန်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်လုံးအိမ်အတွင်းရှိ အရည်များကိုဖယ်ရှားခြင်းနည်းကို ရောဂါအဆင့် (၅)ရှိကလေးငယ်များတွင်သာ ပြုလုပ်ပါသည်။
နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လမစေ့ဘဲမွေးသောကလေးများတွင် ဖြစ်သည့် မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းနေသူများအတွက် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလဲ။
ထိုရောဂါကို ကာကွယ်ရန် အထိရောက်ဆုံးအချက်မှာ လမစေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်းကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် မိခင်လောင်းအားစောင့်ရှောက်ခြင်း နှင့် သားအိမ်ထဲတွင် မိမိ၏ကလေးကျန်းမာနေစေရန် စောင့်ရှောက်မှုများ၊ နေထိုင်ပုံများကို အသိပညာပေးရပါမည်။
လမစေ့ဘဲမွေးလာခဲ့လျှင်လည်း ကလေးကို အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်လုံလောက်စွာပေးခြင်း၊မျက်စိအမြင်လွှာချို့ယွင်းမှုမရှိသေးသော်လည်း ကလေးဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ မျက်စိကို မှန်မှန်စစ်ဆေးပေးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရပါမည်။
Retinopathy of prematurity.http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premature-birth/expert-answers/rop-treatment/faq-20058185.Accessed November 21, 2016.
Retinopathy of prematurity.http://www.webmd.com/eye-health/retinopathy-of-prematurity.Accessed November 21, 2016.
Retinopathy of prematurity.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17332988. Accessed November 21, 2016.